Microsoft inotenga GitHub ye $ 7.500 bhiriyoni | Linux Vakapindwa muropa
Makuhwa akati wandei akaitwa nezve kutenga kweGitHub uye Microsoft ndiyo yakapa ziviso yepamutemo yekutora kwayo nyowani. Microsoft inotarisira nekutenga uku kuwedzera mapurogiramu ekushandisa uye uve zvirinani uye zvinogara zvemahara software kuvandudza paGitHub.
Microsoft CEO Satya Nadella akati kubatana pakati pemafemu maviri kuchasimbisa kuzvipira kweMicrosoft mukuvandudza uye rusununguko mukugadzirwa kwesoftware. Uku kutora kwanga kusiri kwakachipa nekuti kubhadharwa neMicrosoft mune ino investa kwaive zviuru mazana manomwe nemazana mashanu madhora akabhadharwa muzvikamu zveMicrosoft.
Naizvozvo uku ndiko kwechipiri kukuru kutora CEO Satya Nadella mushure meLinkedIn maakabhadhara madhora anosvika mabhiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora. Hatigone kukanganwa kana kupa zvishoma kutengwa kweNokia kwe26,2 mabhiriyoni emadhora munaGunyana 7.200 uyeQuantive 2013 mamirioni emadhora muna Nyamavhuvhu 6.333.
Kune avo vasati vaziva GitHub ino inzvimbo yekudyidzana inosimudzira yekubata mapurojekiti uchishandisa iyo Git vhezheni yekudzora system. Iyo kodhi yemapurojekiti akaitirwa paGitHub inowanzo chengetwa pachena, kunyangwe ichishandisa akabhadharwa account, iyo zvakare inobvumidza kuitisa yakavanzika zvinyorwa.
"Vagadziri ndivo mapiyona ezera iri redhijitari, uye GitHub ndiyo imba yavo. Tichabvuma kushandiswa kweGitHub nevekuvandudza mabhizinesi kuburikidza nematanho edu ekutengesa uye vatinoshanda navo, pamwe nekuwana nhepfenyuro yeMicrosoft yepasi rese uye masevhisi emafu “iri idanho rakakosha kumberi kwekuzivisa kwaNadella.
1 Chii chinonzi Microsoft nechinangwa ichi?
2 Chii chichaitika kuGitHub?
Chii chinonzi Microsoft nechinangwa ichi?
Microsoft yanga yatovepo paGitHub iine mamirioni maviri ekusimbiswa uye zviuru zvevagadziri vanopa iyo yekudyira zuva nezuva. Iyo kambani inotungamirwa naNadella inodzoreredza humwe hushoma hwakanga hwarasika munyika ye software yekuvandudza mumakore apfuura.
Padanho rinoshanda revashandisi veGitHub, zvirinani ikozvino, hapana chinoshanduka. Chinangwa cheMicrosoft kusimudzira kushandiswa kwepuratifomu nemakambani, kusanganisa masevhisi ayo neaya eGitHub.
Chii chichaitika kuGitHub?
GitHub ine mamirioni makumi maviri nemasere evashandisi, inochengeterwa 28 mamirioni ezvinyorwa.
Kunyangwe pamwe nekusimbiswa chaiko neMicrosoft yekutenga kweGitHub Mazana evashanduri vanoshingaira vepuratifomu iyi vasina kugutsikana vakatanga kutamisa mapurojekiti avo kuvhura sosi inokwikwidza GitLab.
Kune rimwe divi, Microsoft yechikamu chayo inotarisira kuve nebhenefiti maererano nekukura kwayo kwecomputer services mugore neichi kufamba.
Nezve iyoYemukati shanduko Nat Friedman (Microsoft Mutevedzeri Wemutungamiri) achashanda se CEO weGitHub mushure mekuwana, kune rimwe divi nevashandi veGitHub Chris Wanstrath (pari zvino GitHub CEO) achatora nzvimbo semupi wezvehunyanzvi iyo iyo yake huru yekutarisa ichave yekushanda pane zvine hungwaru software zvirongwa.
“Nguva yehungwaru hwemakore nehungwaru hwemakomputa yasvika. Informatics irikubatanidzwa kupinda pasirese, nezvikamu zvese zvehupenyu hwedu hwezuva nezuva nebasa uye zvese zvikamu zvevanhu vedu uye hupfumi zvichishandurwa nehunyanzvi hwedigital. Vagadziri ndivo vavaki vezera idzva iri, vachinyora kodhi yenyika. Uye GitHub ndiyo imba yako.
Vagadziri vacharamba vachikwanisa kushandisa mitauro yekuronga, maturusi uye masisitimu anoshanda avanosarudza kumabasa avo, uye vachakwanisa kuendesa kodhi yavo pane chero hurongwa hwekushandisa, chero gore uye chero chinhu. " Satya Nadella akataura.
Kunyangwe vanhu vazhinji vasingabvumirane nesangano iri, hapana chakasara kuti vaone kuti shanduko dzinogona kuitika papuratifomu dzinozouya mushure meizvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inotenga GitHub ye $ 7.500 bhiriyoni
Canonical inogadziridza Ubuntu yekuvandudza mazuva